साख्तरसँग रियल स्तब्ध- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
बुधबार एकै दिन ३१ जनाको मृत्यु, ५ हजार ७ सय ४३ संक्रमित थपिए
कार्तिक ६, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट देशभर हालसम्मकै धेरै संक्रमण दर २८.५४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । यो बुधबार साँझसम्मको विवरण हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसोसम्म २६ जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।
कोरोना संक्रमणबाट बुधबार हालसम्मकै धेरै ३१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । उपत्यकाका मात्रै १३ जना छन् । सुनसरीको गढी–४ की उच्च रक्तचापकी ५५ वर्षीया महिलाको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि कात्तिक ४ गते प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएकी उनको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले बताए । सुनसरीको बराहक्षेत्रका ६८ वर्षीय पुरुषको पनि मंगलबार राति मृत्यु भएको छ ।
मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगी उनको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो । धरान–१६ का ९० वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ । उनी उच्च रक्तचाप र मधुमेहका दीर्घरोगी थिए ।
धनगढीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डोटी केआई सिंह–४ का ५० वर्षीय पुरुषको बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिपसिंह श्रेष्ठले बताए । रगतमा इन्फेक्सन भएपछि उनलाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । उनी डोटीबाट कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । धनगढी–२ का ६५ वर्षका पुरुषको बाटामै मृत्यु भएको छ । होम आइसोलेसनमा रहेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि मंगलबार राति सेती अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो । मंगलबार राति नै भारतको लखनउमा धनगढीका ६० वर्षीय व्यापारीको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
रूपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बुटवल–११ का ४७ वर्षीय र बुटवल–१७ मोतीपुरका ८१ वर्षीय वृद्धको बुधबार मृत्यु भएको छ । ४७ वर्षका पुरुषमा असोज २४ गते कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए । मोतीपुरका वृद्ध असोज २७ गते पोजिटिभ नतिजा आएपछि अस्पताल ल्याइएका थिए । दुवै जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए । त्यसैगरी, रुपन्देहीको तिलोत्तमा–५ का ४७ वर्षीय पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको छ । मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको तिलोत्तमा आइसोलेसन प्रमुख केशव भट्टराईले बताए । रुपन्देहीकै ४१ वर्षीया महिलाको पनि मृत्यु भएको छ ।
पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा बगनासकाली–७ का ७८ वर्षीय पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले बताए । उनी दम र सुगरबाट ग्रस्त थिए । चितवन मेडिकल कलेजको भरतपुरमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा रत्ननगर–१३ का ४० वर्षीय पुरुषको बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार उनी असोज २३ मा ज्वरो तथा निमोनियाको समस्या लिएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनी क्यान्सर रोगको पनि उपचार गराइरहेका थिए ।
नवलपरासीका ७५ वर्षीया महिला, महोत्तरीकी ६० वर्षीया महिला, धादिङकी ८६ वर्षीया महिला, म्याग्दीका ८५ वर्षीय पुरुष, नुवाकोटकी ७० वर्षीया महिला र कञ्चनपुरका २४ वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भक्तपुरमा ७४ र ७२ वर्षीय पुरुष र ४२ वर्षीया महिला तथा ललितपुरका ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । यस्तै, काठमाडौंमा ८१, ८६, ७४, ६२, ६७, ६३, र ५१ वर्षीय पुरुष तथा ७६ र ४९ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०७:३०